मातृका पोखरेल: सुत्केरी होटलको सेल, दामनको मूला र वरमझियाको पेडा - रामप्रसाद पन्त
यात्रा गर्छु भन्दैमा गरिने र लेख्छु भन्दैमा लेखिने विषयवस्तु होइन रहेछ । फेरि यात्रा स्थानविशेषसँग भन्दा विषयवस्तुसँग प्रभावित हुँदो रहेछ । यसो नभइदिँदो हो त यस पटकको यात्राअनुरोधलाई मैले स्वीकार गर्ने पनि थिइनँ र भूगोलको त्यस बिन्दुभित्र म प्रवेश गर्ने नै थिइनँ । यसर्थ कि झापा मेरो लागि नौलो थिएन ।
सोचेँ, संस्था मेरो हो । संस्थाभित्रको मुख्य नायक मेरो आदर्श पात्र हो । यात्राको उद्देश्य अरुभन्दा बेग्लै हो । काम बेग्लै हो र संस्थाको असल उद्देश्यलाई सफल पार्नु मेरो कर्तव्य पनि हो ।
मस्तिष्कले बोध ग¥यो अविलम्ब ।
दिन थियो — २०६९ सालको असोज १२ गते । समुपस्थित हुने केन्द्रस्थल थियो — राष्ट्रिय सभागृहको मूलद्वार । समय थियो — बिहानको ६ः०० बजे र उद्देश्य थियो— नेपाल साहित्यिक पत्रकार संघको आयोजनामा झापाको भद्रपुरमा सम्पन्न हुने सम्मान एवम् कार्यपत्र प्रस्तुत समारोह ।
यात्राको प्रारम्भस्थलसम्म पुग्न निजी सवारी साधन उपलब्ध भएको थियो — भाष्कर भण्डारी तथा दीपक भण्डारीबाट र उपयोगकर्ता थियौँ — रोचक घिमिरे, ठाकुर शर्मा र म ।
हामी सम्बन्धित स्थानमा पुग्दा मोहन दुवालदम्पती माइक्रोबस सहित उपस्थित भइसक्नुभएको थियो र मातृका पोखरेल र विष्णु भण्डारीले पनि हामीलाई उछिनिसक्नु भएको थियो । प्रतीक्षित व्यक्तिहरु— डा. तुलसी भट्टराई, नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र फोटो पत्रकार नरेश श्रेष्ठ पनि धेरै बेर नगरेर आइपुग्नुभयो ।
आउँदाआउँदै नरेन्द्रजीले एउटा अत्यन्त दर्दनाक खबर सुनाउनुभयो — ‘एकैछिन अगाडि धावन मार्गबाट उड्दाउड्दै एउटा विमान दुर्घटना भएर मनोहरा किनारमा बलिरहेको छ रे ! मानिस कति मरे, थाहा छैन ।’
सात बजेको समाचार सुन्न एकछिन कुर्नुप¥यो हामीले ।
समाचार त माइक्रोबसमा गुड्दागुड्दै पनि सुन्न सकिन्थ्यो, तर समयमाथि सम्मान जनाउन सक्नुभएन लक्ष्मी उप्रेतीले र दुर्दान्त समाचार सुन्यौँ हामीले त्यहीँ बसेर । उडेको चारै मिनेटमा चरामा ठोक्किएर असन्तुलित भई आगो लाग्दै खसेको सीता एयरको विमानमा छटपटाउँदा छटपटाउँदै सात जना नेपाली, सात जना वेलायती र पाँच जना जर्मनीले जीवन विसर्जन गरे रे !
सुनेर मर्माहत भयौँ हामी ।
यात्राको आरम्भमै कति नराम्रो समाचार सुन्नुप¥यो हामीले !
प्रतीक्षा लक्ष्मीकै थियो ।
हो, प्रतीक्षा लक्ष्मीकै गर्छन् सबैले, हामी पनि त्यही गर्दै थियौँ ।
नरेश श्रेष्ठले संस्मरण दिलाउनुभयो इलामको, नाम उच्चारण गर्नुभयो गीता कार्कीको र प्रश्न गर्नुभयो — ‘जहाँ पनि प्रतीक्षा गराउनेमा महिला नै अघि पर्छन्, के कारण हो ?’
त्यसैबेला मोवाइल सम्पर्क गर्नुभएछ — रोचक दाइले । जाममा पर्नुभएको छ रे लक्ष्मीजी !
‘लौ उदय भयो लक्ष्मीजीको !’ — सर्वप्रथम देख्नुभएछ दुवालजीले ।
नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भन्न बाँकी राख्नुभएन — ‘बल्ल प्रमुख अतिथि आइपुग्नुभयो ।’
हो, हाम्रो संस्कृति विकृत बन्दै गएको छ — प्रमुख अतिथि भएपछि ढिलै आउनुपर्ने ! र अन्य अतिथिलाई घण्टौँ कुराउनुपर्ने !
आउँदाआउँदै लक्ष्मीजीले कारण बताउनुभयो— ‘शनिबारको दिन यस्तै हुन्छ भन्या ! माइक्रो अरु दिनजस्तो छिटो छिटो पाइँदैन ।’
मातृकाजीले सच्याउनुभयो — ‘आज शनिबार कहाँ हो र ? आज त शुक्रबार ।’
हाँसो भयो बेस्सरी ।
नरेशजीले सुटुक्क भन्नुभयो मसँग र उदाहरण दिनुभयो— बाबा बस्नेतको । उनी जाममा परिछन् रे एक पटक चाबेलमा, अनि बबरमहलको बाटो आइन् रे प्रज्ञा भवन !
ढाँटेको कुरो कहाँ मिल्छ र ! कतै न कतैबाट खुस्किहाल्छ नि !
अब भने हामीले विलम्ब गरेनौँ । पहिले सम्मान ग¥यौँ महिलाको र त्यसपछि सम्मान ग¥यौँ उमेरको ।
लक्ष्मी उप्रेती र दुवालपत्नी भारती श्रेष्ठ बसे चालससँगै अगाडिको सिटमा । साठी वर्षमाथिका रोचक घिमिरे, नरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र डा. तुलसी भट्टराई बसे दोस्रो सिटमा र साठीकै हाराहारीका मोहन दुवाल सहित मातृका पोखरेल, विष्णु भण्डारी, ठाकुर शर्मा, नरेन्द्र श्रेष्ठ र म बस्यौँ पछिल्तिरका दुईवटा सिटहरुमा । चार लाइन सिटमा चालक सहित तीनतीन जनाको दरले बस्यौँ हामी । ठिक्क भयो सिट ।
छ बजे आइसक्ने र सवा छसम्म हिँडिसक्ने योजना बनाएका हामीहरु ठिक एक घण्टा ढिलो गरी हिँड्यौँ सवा सात बजे ।
त्रिपुरेश्वर पुगेपछि कुरा उठ्यो — कुन बाटो जाने ? दक्षिणकालीको बाटो हेटौँडा निस्कन सम्भव छ कि छैन ?
सम्भव नहुने टिप्पणी आयो धेरैबाट ।
जाम छल्न माइक्रो लाग्यो बल्खु हुँदै कलङ्कीतिर । बल्खुमा पार्किङ गरिएका हेटौँडा चल्ने गाडीहरु सबै टाटा सुमो नै भएकाले माइक्रो जाँदो रहेनछ भन्ने निक्र्याैल ग¥यौँ हामीले ।
नागढुङ्गा पुग्दा आठ बज्यो, नौबिसे पुग्दा नौ ।
‘त्रिभुवन राजपथ हुँदै गए कसो होला ?’— रोचक दाइको यस प्रश्नप्रति ठाडै विरोध गर्नुभयो — डा. भट्टराईले ।
त्यसैबेला कुरा उठाउनुभयो विष्णु भण्डारीले — नौबिसेमा मिठो सेलरोटी खान पाइन्छ भनेर ।
केही सेलप्रेमीहरुले जिब्रो मिठ्याए— ‘त्यसै हो भने चिया चमेना यहीँ खाइदिउँ न !’
हुन पनि हो, चियानास्ता गर्न धार्के नै पुग्नुपर्ने के छ र ? पहिले त खाजा खानका लागि नौबिसे र खानीखोला नै प्रसिद्ध थिए । पछि खुल्ला ठाउँको आवश्यकता प¥यो र नारायणघाटको बदला रामनगर चम्केजस्तै चम्क्यो धार्के र जुँगे खोला ।
कमिशन खाने सम्झौता गरेका चालकहरुले जुन होटल अगाडि लगेर अड्याइदियो त्यहीँ खाने त हो प्यासेन्जरले ।
तर आज भने हामीलाई त्यो बाध्यता थिएन । हामीले जहाँ चाह्यो त्यहीँ माइक्रो अड्याउन सक्थ्यौँ र रुचि अनुसार खानेकुरा खान सक्थ्यौँ । यसै मानसिकतालाई मूर्तरुप दिन हामीले गाडी अड्यायौँ पृथ्वी राजमार्ग सोझ्याएर । अनि पस्यौँ— जोशी भोजनालय लेखिएको एउटा सेल पसलमा र अर्डर ग¥यौँ सेल, चना र चिया ।
हसक्क हस्को आयो— ज्वानोको ।
यसो आँखा घुमाएर हेर्दा होटलको एक कुनामा देखियो — टेबुलमाथि सुतिरहेको एउटा नवजात शिशु ।
लौ वा, सुत्केरी होटलमा पो सेल खान आइपुगिएछ !
उहिले भए पो सुत्केरो परेको घरमा खान नहुने, सुत्केरीलाई छुन नहुने ! अहिलेको जमानामा केको सुत्केरो, केको छोइछिटो ! फेरि खानेकुरा टेबुलमा आइसकेपछि नखाएर भो र !
खायौँ, ज्वानोको बास्ना लिँदै खानेकुरा र पानी किन्यौँ चार÷पाँच बोतल ।
हामी विलम्ब नगरेर माइक्रोमा चढ्यौँ र बढ्यौँ अगाडि । गाडीले गति लियो पहिलेभन्दा बढी ।
डा. भट्टराईले भन्नुभयो— ‘अब एकैचोटि हेटौँडाको लोकप्रिय होटल । समय कम छ, हामीले ६१२ किलोमिटर गुड्नुछ ।’
तर मातृकाजीको मत रह्यो — ‘त्रिशूलीको किनारमा बाटोको कुनामा बसेर हाम्रो प्रतीक्षा गरिरहेका दिदीबहिनीहरुलाई पनि भेट्नु पर्ला कि ! उनीहरुले फिँजाइराखेका काँक्रा अम्बा र केराको स्वाद पनि लिनुपर्ला कि !’
कुरो मनासिव थियो । सामान्य चियानास्ताको भरमा हेटौँडा पुग्न त गाह्रै पर्ला — हामी मोटर चढ्नेलाई भन्दा चालकलाई ।
गाडी रिजर्भ गरेर हिँड्नेहरुको ध्यान प्रायः चालकमा पर्दाे रहेनछ । गाडीभित्र चानुमानु बस्नेहरु त भोकै रहे पनि, डल्लिएरै भए पनि पुग्छन् ठाउँमा, तर चालकलाई त्यसो गरेर भयो र ?
यस्तै अनुभूति भइसकेको थियो मलाई यसअघिको यात्रामा । मैले त्यही सोचेँ र त्यही सम्झेँ— स्वर्गद्वारीदेखि बेनीसम्मको यात्रा । बडो डरलाग्दो भएको थियो त्यो यात्रा ड्राइभर निदाएर ।
माइक्रो तीव्रगामी बनेको थियो । बाटोमा गाडीहरु पनि पातला देखिँदै थिए । सोच्दै थियौँ हामी— पूर्व वा पश्चिमबाट आउने रात्रीबसहरु लाइन लागेर आउनुपर्ने हो ! लामो दूरीका दिवासेवाहरु पनि अगाडि पछाडि देखिनुपर्ने हो ! के भयो खै देखिँदैनन् त ?
यस्तै जिज्ञासा र आशङ्कामा हामी पुगिसकेछौँ गल्छी ।
यस यात्राका वाचाल वक्ता देखिनुभएको छ— डा. भट्टराई ।
गल्छीको गल्छेडोमा छिर्नेबित्तिकै उहाँले गल्छी बन्नुको कथा सुनाउन थाल्नुभयो—
‘सरदार फौद सिंह जागिरे थिए— जङ्गबहादुरको दरबारमा र उनको जागिरले निरन्तरता पायो जगतजंगको पालासम्म । तर जंगबहादुरका सन्तानको सत्ता पतन भयो र फौद सिंहको जागिर पनि सँगसँगै गयो । उनी रणोद्विपको शरणमा पुगे ।
रणोद्विपले सोधे— ‘के गर्छस् त फौदे अब तैँले ?’
फौदसिंहले बिन्ती गरे — ‘नदीमाथि आवाद गरिखान पाउँ सरकार !’
नदीमाथि आवाद ?
शङ्का लाग्दालाग्दै पनि हुकुम दिए रणोद्विपले — ‘गरी खा ।’
त्यसपछि गल्छीको आसपासमै घर भएका फौद सिंहले नौबिसेतिरबाट बग्दै गएको महेश खोलालाई त्रिशूलीको दोभान भन्दा दुई किलोमिटर वरैबाट पहाड काटेर त्रिशूलीमा मिसाइदिए । हालको दुई किलोमिटर गल्छी, खोलाबाट जमिनमा परिणत भयो र त्यो सबै भूभाग फौद सिंहको अधीनमा आयो । वि.सं. १९३८ सालको कुरा ।’
यी रमाइला कुराहरु सुन्दै हामी गल्छीको खोँचमा गुडिरहेका थियौँ । त्यस कथाले विश्राम पाउनेबित्तिकै डा. भट्टराईले दाहिनेतिर औँलो तेस्र्याएर भन्नुभयो — ‘यहाँ एउटा लस्सी केन्द्र छ । विशुद्ध दहीबाट बनेको मीठो लस्सी खान पाइन्छ यहाँ । त्यो मात्र होइन, तीस रुपैयाँमा एक कचौरा कुराउनी पनि खान पाइन्छ ।’
कुरा सुनेर जिब्रो रसायो हाम्रो, तर गाडी रोकिएन ।
गल्छी काटेर त्रिशूलीको किनारमा गुड्दै गर्दा कुन्नि कसको मोबाइलमा खबर आयो — चितवन बन्दको ।
गाडीहरु कम गुडेको आशङ्काले मूर्तरुप लिने हो कि भन्ने डर लाग्यो हामीलाई ।
कुरो त स्पष्ट हुनुप¥यो ।
ज्वरो आएर झापा जान नसक्ने भई सुतेका चितवनका साहित्यकार डि.आर. पोखरेललाई पनि थाहा होला चितवन बन्दको कुरा !
मातृकाजीले फोन सम्पर्क गर्नुभयो पोखरेलसँग ।
साँच्चिकै बन्द रहेछ चितवन । किरण वैद्य पक्षधरले बन्द गरेको रे !
यद्यपि हाम्रो माइक्रो अगाडि नेपाल साहित्यिक पत्रकार संघको तुल टाँगिएको थियो । हामीसँग संस्थाका परिचयपत्रहरु पनि थिए । तथापि हामीले आँट गर्न सकेनौँ अगाडि बढ्न ।
सोच्यौँ— साहित्यलाई कसले टेर्छ ! नेपाल पत्रकार संघ भए पो टेथ्र्याे । पत्रकारको अगाडि साहित्यिक थपिएपछि मानौँ त्यो राजनीतिक आँखाबाट बहिष्कृत भयो । साहित्यले के गर्छ समाजलाई ? अन्तर्मर्म के थाहा सतही विचार भएकालाई ! आन्दोलनकारीलाई ! बन्दकर्तालाई !
हामी आदमघाट पुगिसकेछौँ, नौबिसेबाट २८ किलोमिटर अगाडि । ढिलो भइरहेको बेलामा ५६ किलोमिटर अनावश्यक गुड्नुप¥यो हामीले । हामी फर्कियौँ त्रिभुवन राजपथहुँदै जानेगरी पुनः नौबिसेतिर ।
ठाकुर शर्माले भन्नुभयो — ‘नियात्राकारलाई मात्र फाइदा भयो, अरुलाई बेकार ।’
हो, नियात्राकारले यस्ता घटना भेटेन भने पाठकलाई कसरी मनोरञ्जन दिन्छ ?
कुरा उठिरह्यो— सुत्केरी होटलको सेलको ।
घुमायो हामीलाई सुत्केरी होटलको सेलले ।
विवाहोत्सव र विवाह गरिसकेपछि छोरी घर पठाउँदा सेल उपहार दिने मनोवैज्ञानिक कारण यही रे !— सम्बन्ध सेलको जस्तो होस्, छोरी माइतीमा आइरहोस् ।
तर आजको सेलले झुक्यायो हामीलाई । झापा पुगेपछि मात्र घुमाउनुपर्ने थियो, घुमायो आदमघाटबाटै । धन्न मौकैमा बुद्धि पु¥याइएछ र पो, नत्र चितवनै पुग्नुपथ्र्यो वा चितवनमै अड्नुपथ्र्याे ।
‘एक घण्टा लक्ष्मीजीका कारण ढिलो भयो, अर्काे घण्टा घुमाइमा । दुई घण्टा ढिला भइसक्यौँ हामी’ — कसैबाट आवाज आयो ।
‘मैले ढिलो गरेकोले नजिकैबाट फर्कन पाइयो, नत्र चितवन पुगेर फर्कनुपथ्र्याे, राम्रै भयो ।’
यसबेला भने बुद्धि पु¥याएर जवाफ दिनुभयो लक्ष्मीजीले ।
हाँसो भयो हामीबीच ।
हो, वास्तवमा जे पनि हुन सक्थ्यो ।
डि आर पोखरेलको समीक्षा भयो त्यसैबेला । उहाँलाई थाहा थियो— हामी आज झापा जाँदैछाँै भन्ने । र, यो पनि थाहा थियो— चितवन बन्द छ भन्ने । यस्तो अवस्थामा नेपाल साहित्यिक पत्रकार संघको जिम्मेवार सदस्य भएको नाता र झापा जानका लागि प्रस्तावित व्यक्तित्व समेत भएको नाताले पनि हामीलाई बन्दबारे जानकारी गराउनुपथ्र्याे ।
कुरा हुँदाहुँदै हामी पुनः गल्छी प्रवेश ग¥यौँ ।
‘यसै ढिलो उसै ढिलो, लस्सी केन्द्रमा पसेर एक÷एक गिलास लस्सी सुप्काएरै जाने हो कि !’ — मातृका पोखरेलको यस प्रस्तावलाई म लगायत केही व्यक्तिले समर्थन जनायौँ । बाँकीले मुख नखोले पनि विरोध गर्नुभएन । यसको अर्थ थियो— मौन स्वीकृति ।
तर गाडी अड्याउनकै लागि चालकलाई कसैबाट आदेश भएन । गाडी नरोकिएर अगाडि बढ्यो ।
यही घटना संसदमा घटेको भए विधेयक पारित हुन्थ्यो— ‘कतैबाट हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएकोले’ भनेर । तर यहाँ त उल्टो भयो — ‘अड्याउनै पर्छ’ भन्ने शब्द कतैबाट नआएर ।
हामी नौबिसे फर्केर त्रिभुवन राजपथ हुँदै टिस्टुङतिर उकालो लाग्दा साढे दस बजिसकेको थियो ।
त्यस बाटोसँग अपरिचित व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ विष्णु भण्डारी । राम्रो लाग्यो रे उहाँलाई गाउँमा छितरिएर रहेका ती घरहरु, त्यो हरियाली र फनफनी घुम्दै उकालो लागेको त्रिभुवन राजपथ ।
टिस्टुङ पुगेपछि मैले सम्झेँ— महाकवि देवकोटालाई । उहाँ स्वास्थ्यलाभका लागि केही समय टिस्टुङ आएर बस्नुभएको थियो रे !
वास्तवमा स्वस्थ र स्वच्छ हावापानी छ टिस्टुङको । हावापानी जस्तै अन्य भौतिक सुुविधा उपलब्ध भए कसले छाड्थ्यो आफ्नो जन्मथलो ?
हामी टिस्टुङ नाघेर पालुङको खुल्ला बस्तीमा प्रवेश गरिसकेका थियौँ ।
पछिल्लो परिवर्तित राजनीतिमा लागेका र सहिद बनेका केही पालुङबासीको नाम लिँदै हुनुहुन्थ्यो मातृकाजी । र, भन्दै हुनुहुन्थ्यो— ‘यहाँको जग्गा छोइनसक्नु छ— काठमाडौँको जस्तो ।’
डा. भट्टराई थप्दै हुनुहुन्थ्यो— ‘यहाँका जग्गामा चार बाली लाग्छ, राम्रो अनाज फल्छ, अनि त किन नहोस् महँगो जग्गा ?’
म मूला सम्झँदै थिएँ— ‘यहाँका मूलै मीठा, अनि कति सस्ता !’
मेरो भनाइलाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्थ्यो— ठाकुर शर्मा र नरेश श्रेष्ठले ।
मूला खाने माग उठ्दै थियो अरुहरुबाट पनि । बाटोको कुनामा ठाउँठाउँमा थुपारेर राखिएका देखिँदै थिए— मूलाका रासहरु ।
तर ‘गाडी रोक, मूला किनौँ’ भन्ने आँट कसैले गर्न सकिरहेको थिएन र चालकबाट पनि गाडी अड्याउने सङ्केत देखिएको थिएन । यस्तै यस्तैमा मूलाका रासहरु पछि पर्दैै गए, माइक्रो पालुङ छाडेर दामनको जङ्गलमा गुड्न थाल्यो ।
डा. भट्टराईले भन्नुभयो —‘लस्सी पनि गयो, मूला पनि गयो, जे जे आयो त्यो सबै गयो । तर दामनको बोडीको तरकारी छाड्नुहुन्न । एक एक प्लेट स्वादिलो तरकारी हजम गरेपछि हामीलाई हेटौँडा पुग्न गाह्रो पनि पर्दैन ।’
दामन बजार पनि नघायो माइक्रोले सुलुत्तै, तर रोकिने सङ्केतै देखिएन ।
चालकले हाम्रो कुरा सुन्दा पनि सुन्दैन, प्रतिप्रश्न पनि गर्दैन र रोक्न खोज्नुको कारण पनि बुझ्न चाहँदैन । अनि ‘रोक’ भन्ने ठाडो आदेश कतैबाट निस्कँदा पनि निस्कँदैन । लस्सी पनि गयो, मुला पनि गयो र बोडीको तरकारी पनि जाने डर भयो ।
किन यस्तो भइरहेछ ? चालकको आसय के हो ? वा रिमोट कहाँ छ चालकको ? अध्ययनको विषय बन्यो हामी माझ ।
त्यस राजपथको अत्युच्च घुम्तीमा घुम्दै गर्दा दुई÷तीनवटा डोकामा सलक्क परेका सेता र सफा मूला देखेपछि पुनः ध्यान आकृष्ट भयो हाम्रो ।
त्यस बेला नामै किटेर मुख खोल्नुभयो मोहन दुवालले आफ्नै मातृभाषामा — ‘ए अजय ! गाडी डिकी डिकी ।’
त्यसपछि गाडी रोक्यो चालकले । नाम पनि थाहा भयो त्यसै बेला अजय रञ्जितको । र, यो पनि थाहा भयो — चालकले चलाइरहेको गाडीको ब्रेक कहाँ रहेछ भन्ने ?
पछि महसुस ग¥यौँ हामीहरुले — यति पनि नबुझ्ने हामी कति उल्लू ? जसले गाडी जिम्मा लिएको छ र जसले यात्राको उद्देश्यलाई सहजता साथ सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी बोध गरेर हिँडेको छ, त्यसको साँचो उसैमा नियन्त्रित नभएर कहाँ हुन्छ त ?
मातृका पोखरेल यस यात्राका क्यासियर । भाउताउ गरेर उहाँले मूला किन्नुभयो र बाँड्दै जानुभयो । झन्डै दुईवटा मुला परे एकजनाको भागमा । मातृकाजीले मूला किन्दै गर्दा म जङ्गलको आश्रयमा थिएँ । त्यसैले थाहा भएन, उहाँले तौलेर लिनुभयो कि गनेर । जम्माजम्मी सत्तरी रुपैयाँको किन्नुभएछ उहाँले मूला ।
दामनको पानीले धोइसकेका यति सफा मूला पनि फेरि धोइरहनुपर्छ र ? पर्दैन ।
दाँत फुक्लेको मानिस त्यहाँ कोही देखिएन । सिङ्गो मूला टोक्न थाल्यौँ कटाकट । कति मीठा मूला ! अलिअलि त भोकले पनि मिठास थप्यो होला ! मूला खाइसकेपछिको परिणाम खानेका लागि त हितकर नै होला, तर सँगै बसेकाका लागि अप्रिय हुन्छ । तर यहाँ त सबै मूला । मूलाको परिणाम जे होला होला ! खान कसैले बाँकी राखेन ।
जुनसुकै चिजले पनि आफ्नो गुण त देखाउँछ देखाउँछ । गुण देखाउनु उसको धर्म हो भने हामीले खाएको मूलाले पनि आफ्नो धर्म छाड्न भयो र ? भएन । देखाउन थाल्यो मूलाले आफ्नो असली धर्म । सबै एकै ड्याङका मूला ! कसैले केही बोल्न भएन त्यहाँ ?
दामनको दक्षिणी भागबाट उँधो लाग्दै गर्दा रोचक दाइले मेरो ध्यान आकृष्ट गर्नुभयो— ‘हेर्नुस् त पन्तजी ! तलतिरको त्यो दृश्य ! बादलका ती भुल्काहरु, सूर्यकिरणको त्यो छिरमिरे वर्षा, हरियो घनाजङ्गल र जङ्गलको बीचमा घर ।’
वा ...... साँच्चै सुन्दर थियो त्यो दृश्य ।
रोचक दाइले नामै किटेर मलाई त्यो दृश्य देखाउनुको तात्विक अर्थ थियो । उहाँलाई पूर्ण विश्वास थियो— अरुले आजको यात्रा वर्णन लेख्लान्, नलेख्लान् ! तर रामप्रसाद पन्तले लेख्छ लेख्छ ।
हामीले अघोर बजार र लामीडाँडालाई पछाडि पार्दै भैँसेतिर ओर्लँदै थियौँ । डा. भट्टराईले भन्नुभयो — ‘अब बाह्र घुम्ती आउनै लाग्यो ।’
बाह्र घुम्ती !? मैले त सुनेको थिएँ सात घुम्ती ! कहाँबाट आयो फेरि बाह्र घुम्ती ? उहाँले ठोकुवा गर्नुभयो — ‘होइन, यहाँ बाह्र ओटा घुम्ती नै छन् ।’
‘नौ घुम्ती कहाँ छ ? डाक्टरसापलाई थाहा छ ?’ मैले प्रश्न गरेँ ।
उहाँले सजिलै भन्नुपर्ने थियो— आफ्नो जन्मस्थानसँग जोडिएको बाटो, तर अकमकिनुभयो ।
म इलाम जाँदा सुनेको कुरा सुनाएँ— ‘करफोकबाट माइखोला ओर्लँदा गोदकको पाखोमा बनेको नागबेली बाटो ।’
हो, उहाँले समर्थन जनाउनुभयो ।
वार्ताको क्रमसँगै हामी घुम्ती घुम्ती ओर्लेर भैँसे पुगेका थियौँ र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको रोपवे सेवालाई टुलुटुलु हेर्दै अघि बढेका थियौँ । हाम्रा अगाडि कुलेखानी खोला आएको थियो, त्यस खोलामा मिसिदै गरेको सेवार खोला भेटिएको थियो र ‘राप्ती’ नामकरण भएर उँधोतिर बग्दै गरेको देखिएको थियो ।
जताबाट गए पनि हेटौँडा । पृथ्वी राजमार्ग हुँदै गए पनि हेटौँडा, कुलेखानी हुँदै गए पनि हेटौँडा र त्रिभुवन राजपथ हुँदै गए पनि हेटौँडा । अर्थात् पृथ्वी राजमार्ग हुँदै गएको भए पनि लोकप्रिय होटलमै भात खाइन्थ्यो, त्रिभुवन राजपथ हुँदै आए पनि लोकप्रियमा ।
मासु खाने जति मांशाहारी लेखिएको टेबुलमा, मासु नखाने जति शाकाहारी लेखिएको टेबुलमा ।
राम्रै लाग्यो होटलको व्यवस्था । दिनेलाई पनि सजिलो, खानेलाई पनि राम्रो । मीठै रहेछ खानेकुरा पनि । भातमाथि तररर घिउ तर्काएपछि त झनै खास्सा ।
पानी वर्षियो मज्जाले एकछिन । शीतलदेखि गर्मीमा झरेका हामीलाई निकै आनन्दको अनुभूति भयो ।
समय दिनको दुई बजिसकेछ । अबेर गर्नुहुन्न हामीले कत्ति पनि ।
हामी माइक्रोमा चढ्यौँ र गुडिहाल्यौँ पथलैयातिर ।
काठमाडौँबाट पथलैया पुग्दासम्म आ–आफ्नै गन्थनहरु मात्र भए । गीत सुन्न पाइएन एउटा पनि ।
‘छँदै छैन कि क्या हो क्यासेट ?’ प्रश्न ग¥यौँ हामीले ।
अब भने ध्यानाकर्षण भयो— अजय रञ्जितको ।
पथलैयाबाट पूर्व हानिनु र गीत घन्कनु एकैचोटि —
‘जादू तेरा मुझ मे चल गया,
मेरा मन फिसल गया ......।’
अब चाहिँ माइक्रोको आवाजै फेरियो — घुनुनुनुनुनुनुनु
लालबन्दी पुगेर माइक्रो रोकियो ।
चिया खान बस्यौँ हामी टेबुल वरिपरि घेरा हालेर ।
चियाका गिलासहरु टेबुलमा राखिए — चिनी भएका, नभएका, दूध हालेका, नहालेका ।
अरुको जस्तै चियाको गिलास रोचक घिमिरेको अगाडि पनि राखिएको थियो । अरुले जस्तै उहाँले पनि गिलास उठाएर चियाको चुस्की लिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, गिलास त तीन टुक्रा । चिया टेबुलभरि छताछुल्ल, छ्याल्लब्याल्ल । धन्न जोगियो लुगाफाटो ।
अनुमान लगाइयो — गिलास नयाँ होला ! पहिले नयाँ गिलासलाई पानीमा उमाल्नुपर्ने, त्यो बुद्धि पु¥याएन होटलवालाले ।
गल्ती महसुस ग¥यो होटलवालाले पनि । अर्काे गिलास आयो चियाको । हामीले चिया खाइसक्यौँ र बाटो तताइहाल्यौँ ।
अबको विश्राम विन्दु बरमझिया । बाजेको पेडा छाड्नुहुँदैन ।
बाजे अर्थात् सप्तरी बरमझियाका बैद्यनाथ साह । उनको पेडा नेपाल प्रसिद्ध । तर उनको मृत्यु भयो एक वर्षअघि । अब त बूढाको नाममा पसलै पिच्छे — बूढोको पेडा, बाजेको पेडा, बूढोको प्रसिद्ध पेडा, बाजेको विशुद्ध पेडा, बूढो बाजेको ताजा पेडा, असली बाजेको पेडा— कति हो कति पसल, कति हो कति साइनबोर्ड — यसै भन्दै हुनुहुन्थ्यो मातृका पोखरेल ।
सुनेर जिब्रो रसाइसकेको थियो मेरो, सायद हाम्रो ! तर बरमझिया पुग्नुअघि नै माइक्रोको गति घट्दै गयो र कन्चनपुर पुगेर अडियो ।
पश्चिमतिरका धेरै नाम दोहोरिइरहेकोमा रोचक अनुभूति हुँदै थियो मलाई— सर्लाहीको नवलपुर, सिराहाको बन्दीपुर र धनगढी, अनि सप्तरीको कन्चनपुर ।
अकस्मात् गाडी रोकिएकोमा जिज्ञासा भयो हामीहरुलाई ।
सोध्यौँ— ‘के भयो ?’
‘गाडीको इन्जिन तात्यो ।’— ड्राइभरले जवाफ दियो ।
‘अब के हुन्छ ?’
‘सेलाउनु पर्छ ।’
‘सेलाउन कति समय लाग्छ ?’
‘लाग्छ, कम्तिमा आधाघण्टा ।’
रातको साढे आठ बजिसकेको छ । इन्जिन कहिले सेलाउने हो ? बरमजियाको पेडा कुन बेला खाने हो ? र, भद्रपुर कुन बेला पुग्ने हो ?
पानी हाल्न पाए अलि चाँडो सेलाउँथ्यो ।
तर कहाँ पाउने यहाँ पानी ?
चालक ओल्र्याे र इन्जिनको कभर खोल्यो । हामी पनि ओर्लियौँ माइक्रोबाट र बस्यौँ बाटोको छेउछाउ टक्राकटुक्रुक । बेन्च पनि रहेछ नजिकै । त्यसैमाथि बस्यौँ अट्नेजति ।
डा. भट्टराईले गोजीबाट रुमाल निकालेर हल्लाउन थाल्नुभयो गाडीको इन्जिन बाहिर ।
रुमालको हल्लाइ इन्जिनले सुन्थ्यो, सुन्दैनथ्यो त्यो बेग्लै कुरा ! मेरो सोचाइमा त्यो स्याम्बुलिक थियो । अर्थात् त्यसको आसय सबैले सक्दो मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने थियो । यस्तै बुझेँ मैले ।
त्यसपछि तुलसी अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रबाटै बाटोको डिलमुनि सम्भाव्यता अध्ययन भयो— ‘ऊ...... त्यहाँ अँध्यारो अँध्यारो खाल्डो देखिँदै छ, पानी पो छ कि क्याहो !’
मैले मोबाइल निकालेँ, बत्ती बालेँ र खाल्डो नजिकै गएर हेरेँ । साँच्चै नै खाल्डोमा अलकति आकासे पानी जमेको रहेछ ।
खुसी भयौँ हामी ।
लौ बोतल लिएर आउनुप¥यो !
पानी खाएर नफालीकन सिटमुनि राखेका दुई÷तीनवटा प्लाष्टिक बोतल लिएर आएँ मैले ।
कुनै बेला काम लाग्छ भनेर राखिएका बोतलबाट काम लिन पाएकोमा प्रसन्नताबोध भयो मलाई ।
पालैपालो बत्ती देखाउने र बोतलमा पानी भर्ने काम गर्दैरह्यौँ डाक्टरसाव र मैले । पानी लैजाँदै इन्जिनमा हाल्दै गरे— अजयले ।
कुल ११ बोतल हालिसकेपछि इन्जिन सही कन्डिसनमा आएको निक्र्याेल गरियो ।
अब ढिलो गर्ने कामै छैन । हामी अविलम्ब बस्यौँ माइक्रोमा र बढ्यौँ अगाडि ।
आयो, बरमझिया । देखिए, ट्युवलाइटले झिलिमिलि होटलहरु । अरुभन्दा चमकदार र ठूलो पेडा पसल अगाडि पुगेर माइक्रो अडियो ।
पसलको कवल जत्तिकै लामो र ठूलो बोर्डमा लेखिएको थियो — पुरानो बूढोको प्रसिद्ध पेडा पसल । र, बोर्डको बीचमा थियो— शिवजीको कलात्मक आकर्षक तस्विर ।
हामीले पेडा हे¥यौँ, चाख्यौँ र सुध्यौँ पनि । शङ्काको घेरामा प¥यो पेडा । पेडा बासी हो भन्ने निक्र्याेल भयो हाम्रो ।
‘प्रथमे ग्रासे मक्षिका पातः’ पेडा देखेर रसाएका हाम्रा जिह्वाहरु एकाएक सुके । हामी ‘ढोँगी जोगीले खरानी धेरै घस्छ’ भन्ने उदाहरण दिँदै गयौँ अर्काे पसलमा । त्यो थियो— साईंबाबा पुरानो पेडा भण्डार ।
बरमझियाकै पेडा नखाए पनि पेडा त खाएका रहेछौँ नि हामीले । पेडाको साँच्चै असली स्वाद त्यहाँ भेटियो । हामीले एक किलो पेडा किनेर खाएनौँ मात्र, पर्सि फर्कँदा आठ÷दस किलो पेडा तयार गरिराख्ने बाचा बँधाएर बढ्यौँ अगाडि ।
रातको साढे नौ बजिसकेछ वरमझिया नेटो काट्दा ।
हाम्रो स्वागतार्थ बसेका झापाबासी साहित्यकारहरुले फोनको बिल धेरै चढाइसके । टोलीनायक रोचक घिमिरेले बाध्यता साथ भन्नुभयो — ‘हामी त्यहाँ पुग्दा कम्तीमा बाह्र बज्छ, तसर्थ तपाईंहरु हामीलाई पर्खेर नबस्नुहोस् । हामी बस्ने होटलको नाम र ठाम बताइदिनुहोस् र होटलवालालाई हाम्रो बाध्यता सुनाइदिनुहोस् ।’
तिर्खाएको गाडीले पानी खान पाएर पनि होला, अबेर भइसक्यो भनेर पनि होला, एकान्त सुनसान सडक पाएर पनि होला, गाडीको रफ्तार अरु बढ्यो । कोशी किनारमा कङ्कलामाईको मेला भर्ने भक्तजनहरुको भीडले केही क्षण गति अवरुद्ध गरिदिएबाहेक हाम्रो गाडीमाथि अवरोध हाल्ने अरु तत्व कतै भेटिएन ।
हामी बिर्तामोडबाट दक्षिण मोडिएर गरामुनि पुग्दा नेपाल साहित्यिक पत्रकार संघ झापाका सचिव कृष्ण सुवेदी ‘निराकार’ माइक्रोले फ्याँकेको हेडलाइटको उज्यालोमा साकार भए । हामी उनैद्वारा स्वागत गरियौँ र उनकै अगुवाइमा चन्द्रगढी हुँदै भद्रपुर रोडको नेपाल सामुदायिक विकास केन्द्र (एनसिडिसी) को कम्पाउन्डभित्र छि¥यौँ रातको १२ः४५ बजे । हामीलाई खानेपिने र बस्ने सबै व्यवस्था त्यहीँ गरिएको रहेछ । बाँकी कुरा भोलिको लागि थाँती राखेर हामी आ–आफ्नो सयनकक्षमा बाँडियौँ ।
कोठातिर जाँदै गर्दा मैले निराकारजीलाई सोधेँ— ‘लामखुट्टे कत्तिको लाग्छ ?’
मैले विशेष चासो राखेर यसर्थ सोधेको थिएँ कि मलाई लामखुट्टे भनेपछि बाघभन्दा पनि बढी डर लाग्छ । लामखुट्टेले टोकेपछि शरीर चिलचिलाउन थाल्छ र फोका उठ्छ ।
निराकारजीले सायद सही नै जवाफ दिनुभएको थियो होला, तर मलाई भने जोकजस्तो लाग्यो उहाँको भनाइ । भन्दै हुनुहुन्थ्यो — ‘तीन तलामाथि रुम भएकोले लामखुट्टे चढ्न सक्दैन कि ! फेरि बत्ती आउँछ रातभर, पङ्खा चल्छ रातभर । समस्या नहोला !’
जे होला होला भनेर ! म ३०३ नम्बर कोठामा गएँ र थाकेको शरीरलाई लमतन्न सुताएँ — रातको साढे एक बजे ।
Posted by मातृका पोखरेल at 7:16 PM